ဆုပန်ထွာ | Myanmar Model
ဆုပန်ထွာ Like this:Like Loading... 52 comments so far rl
May 2, 2008	nice updates..
May 31, 2008	“Vid Caps” are nice…
September 25, 2008	ကျွန်တော်ထက်ကြီးမယ်ထင် ဒါကြောင့်မမလိုခေါ်လိုက်နော် မြန်မာဆန်ဆန်ဝတ်ရင်အရမ်းလှတယ် တကယ်မြန်မာအလှပိုင်ရှင်ပါ မြန်မာဆန်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေ မမ ဇာတ်ကားတွေအမြဲအားပေးနေပါတယ် မမနဲခင်မင်လိုရရင်ခင်ချင်ပါတယ်
March 10, 2009	မမကိုချစ်တယ်
May 15, 2009	မမ မြန်မာဆန်ဆန်လှတာလေးနဲ့အမြဲတမ်းမြင်ချင်ပါတယ်။
May 22, 2009	မမ အပျိုကြီးလုပ်မှာဟင် မြန်မာဆန်ဆန်လေး ၀တ်ရင်အရမ်းလှတယ်။
July 27, 2009	အမရိကရောက်ရောက် ဂျပန်ရောက်ရောက် မေးတော့ ပြောကြတယ်လေ I’m chines.တဲ လူကြည့်တော့ သူတောင်းစားအဝတ်နဲ ပြောင်လဲလို့မရတာက ဘဝပါနော် မြန်မာပြည်မှာနေထိုင်တဲ မိဘတွေတောင် အားမနာဘူး မြန်မာပြည်မှာ မွှေးဖွားခဲတာတော့ အသက်ရှိနေသရွေ ဘယ်တော့မှ ပြောင်းလဲလိုမရတော့ပါသူနော်
November 10, 2009	ကျွန်တောက မပန်ကို အမြဲတမ်းအားပေးနေတဲ့ပရိတ်သတ်တယောက်ပါ မပန်လို့ခေါ်တာစိတ်မဆိုးပါဘူးနော် မပန်ရဲ့ကားတွေထဲမှာ အိုင်းစတိုင်းနဲ့မာနမင်းသမီးကိုအရမ်းကြိုက်ပါတယ် မပန် ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင် မပန်ရဲ့ email လိပ်စာလေးများရနုင်မလား အခုကျွန်တောက United State မှာ အလုပ် လုပ်နေပါတယ်
ကျွန်တော့ရဲ့ email တော့ irrawaddy27@gmail.com ပါ ။ မပန်တစ်ယောက် အကယ်ဒမီဆုတွေ ရယူနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်းနဲ့
ကျွန်တော့ရဲ့ email တော့ irrawaddy27@gmail.com ပါ ။ မပန်တစ်ယောက် အကယ်ဒမီဆုတွေ ရယူနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်းနဲ့ ……..
Joe Joe ku
April 21, 2010	မဆုရေ
တစ်ချက်ကလေးမှ ဟာကွက်မရှိအောင်နေပါ။ ဘာလို့ဆိုရင် တစ်ချက် ဟာသွားတာ နဲ့
Internet ပေါ်မှာ တန်းပြီး သမုတ်တော့တာဘဲလေ။ ဒါတွေက မြန်မာ လူမျိုးတွေ ရဲ့ ထုံးဆန်ဘဲလေ။
Netherland မှ မဆု ရဲ့ ပရိတ်သတ် တစ်ဦး
May 14, 2010	အပျိုကြီးလုပ်ရင် နှမြောစရာကြီးဟ
May 14, 2010	အခုတလောပိန်သွားတယ် ..ခိုးစားတယ်ထင်တယ် အရိုးစူးတတ်တယ်(ခိုးစားရင်)
January 14, 2011	ဆုပန်….;
August 12, 2011	မမကမြန်မာဆန်ဆန်ဝတ်ရင်အရမ်းလှတယ်….. ဟော့ဟော့ရမ်းရမ်းဝတ်ရင်မလှဘူး…..မမရဲ့ ဇာတ်ကားတွေကိုအစဉ်အားပေးလျက်ပါ…….
February 20, 2012	လှပါတယ်နော်..ကြိုးစားပါနော်
May 30, 2012	ညီညီ မဂ်လာပါ ။
မဆု ခုအတော်လည်းကိုချောတယ်လှနှော် မြှောတ်တာမဟုတ်ပါ ညီညီ တကယ်ပြော
တာ နှာကို ဓားနှင့်ခွဲတာအေးလောက်လှရင် ညီညီ မစဉ်းစားခဲ့မိလို့ ပုဆိန်တခြမ်းသာ
အီခုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်လှမှာလည်းမသိတော့ဘူး ညီညီ အံသြမိတယ် ။
ညီညီဆီသို့ ဓာတ်ပုံလှလှလေးတပုံပေါ့နှော် ဒီထက်အောင်မြင်ပါစေ ။ ညီညီ မဂ်လာပါ ။
August 2, 2012	ချစ်တယ်ဗျာ
August 3, 2012	မမဆုပန်ထွာကိုမောင်လေးအရမ်ချစ်တယ်….. မောင်လေးကလှတောကပါ။
August 12, 2012	ခင်ဗျားက လုံးနေတာပဲ
September 4, 2012	မဆုရေ……ကျနော်ကမဆုကိုအမြဲအားပေးနေတဲ့ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ပါ..မကတကယ်ပဲအပျုကြီးလုပ်တော့မှာလားဟင်…….မရဲ့G talkအကောင့်လေးပြောပြနိုင်ရင်သိချင်ပါတယ်………မဆက်လက်အောင်မြင်ပါစေ…………..မဆိုကိုချစ်တဲ့ကျနော်
October 11, 2012	ဆုပန်
December 3, 2012	ဆုပန်ထွာကို အရမ်းလိုးချင်တယ်
တင်ကြီးတော့ ဖင်ကုံးပြီးလိုးရင် ပိုကောင်းလောက်တယ်နော်
လိုးပြီးရင် လီးစုပ်ခိုင်းမယ် ငါ့လီးရည်တွေကို ဆုပန်ထွာရဲ့ ပစပ်ထဲ ထည့်မယ်
အခုတော့ လိုးခွင့်မရတော့ ဓာတ်ပုံတွေကြည့်ရင်း တစ်ခါတစ်လေ သူ့ဇာတ်လမ်းတွေကြည့်ရင်း ဂွင်းပဲ ထုနေရတယ် ဟီးးးး
December 3, 2012	မင်းဝေ ရေ
ဆုပန်ထွာက ဘယ်နိုင်ငံရောက် သူ့ကိုယ်သူ I’m chines. တဲ့လား
ဒို့မြန်မာလီးတွေက တစ်ထွာသာသာပဲ ရှိတာကိုးကွ
December 3, 2012	ဒီကောင်မများ ချစ်တယ်လို့ ပြောတဲ့ကောင်တွေက ရှိသေး
စပွန်ဆာနဲ့ အသက်ဆက်နေရတဲ့ ဆောက်ကောင်မပါကွာ
Lin Latt Ei
December 18, 2012	မမကအရမ်းလှတာပဲနော် မမလိုဆံပင်လည်းရှည်တယ်ရုပ်လည်းချောတဲ.သူကိုအရမ်းချစ်တာညီမလေးက
April 23, 2013	မမကိုချစ်တယ်
April 23, 2013	လိုးချင်တယ်
April 27, 2013	မမ
July 22, 2013	Aww Rember In nyinyi,
July 24, 2013	In Now In say we’can ,
July 31, 2013	So In That we Look In Loooo In,..
April 12, 2014	Im Min Kha Lar Bar Nay Know bar Lar nyinyi( Rember In ) Chit Thu Ya. Nay Pyi Lar Chit Fot Know Bar Ta. Life we The Try in loverly in happy To.
Today in – A moment with Su Pan Htwar: Interview About Her Engagement.
April 23, 2014	စိတ်မကောင်းပါဘူးမရယ်လူတွေကကို့ထမင်းကိုစားပြီးသူများအကြောင်းပြောနေရမှကျေနပ်ကြတာလေအားတင်းထားနော် မ
May 11, 2014	မမကြိုးစားပါ….တကယ်ချစ်ရင်ကျန်တာတွေမလိုပါဘူးနော်…….မမစိတ်ချမ်းသာပါစေ
May 20, 2014	မမရေကြိုးစားနော်မမကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်ဆိုတာမမရဲ့အနီးတစ်နေရာမှာထာဝရရှိနေမှာ အညာသူလေးပါ
June 17, 2014	ညီညီ မဂ်လာပါ ။
အင်းသီချင်းဆိုတာအရမ်းကောင်းပါတယ် ပင်လယ်နားမှာသွာဆိုတယ်ဆို အားပေးပါတယ်ကောင်းပါတယ် ။
ကြိုးစားပါအားပေးပါတယ် အဟီ မရယ်နဲ့နှော် သတိရတယ်နှော် ။
October 27, 2014	Ma Su Key Min Khalarbar Nayknow barlar,.?
November 20, 2014	nyinyi Minkha Larbar,..
December 2, 2014	hello minlha larbar nay knowbarlar,..
December 7, 2014	Im Masu barlooknaybarlay,.!
December 9, 2014	Im thu Khamimasodoe Chityamarpoe,.! Heada,..
December 11, 2014	Aww Ma Su Denay TV Marlarda Hea Liketar Chitlikemaynoe,..
December 26, 2014	Masu To nyinyi Minkha Larbar,..
January 21, 2015	Min Kha Larbar nayknow barlar,.?
January 28, 2015	hello Min Kha Larbar,..
January 29, 2015	in Kha Larbar Nayknow barlat,..
February 6, 2015	hello ,..
March 5, 2015	hello Ma Su Nay Know barlar,..
March 24, 2015	hello have in Ago USA Love Ma Su Pan Min Kha larson Doe may so,..
May 22, 2015	ညီညီမဂ်လာပါ နေကောင်းပါလား ။
May 25, 2015	hi hello barlook naybarlay ,..
August 17, 2015	Hi Hello Nay Knoe Gaybarlar,..